6 maficha anofanirwa kuve nemumhanzi wako | Kubva kuLinux
AnaGaby_Clau | | GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Kune vateveri vemimhanzi, Linux ine yakawanda yevatambi uye hauzive kuti ndeupi waunofanira kusarudza. Ndosaka tichida kutaura zvimwe zvinhu zvatinoona sezvakakosha kune akanaka mumhanzi mutambi.
1 Mutambi anofanira kukwanisa kugadzirirwa kupinza mumhanzi pasina shanduko
2 Mutambi anofanira kunge aine "smart playlist" ficha
3 Mutambi haafanire kumanikidza mushandisi kugara achipindirana mune zvinyorwa
4 Mutambi anofanira kunge aine nzira yakapusa yekuisa yekuvhara mifananidzo
5 Mutambi anofanira kuratidza chinobatika bit rate apo mimhanzi iri kutamba
6 Mutambi anofanirwa kuve neakanakisa kuronga, dhizaini uye kuita
Mutambi anofanira kukwanisa kugadzirirwa kupinza mumhanzi pasina shanduko
Izvi zvinobvumidza mimhanzi kuti ichinje iyo bit rate uye kudzika pane nhunzi. Izvo zvinoitawo kuti zvive nyore kuisa chiratidzo kune yekunze dhijitari odhiyo converter, iyo yakatsaurirwa kune hi-fi mimhanzi yekutamba uye inokwanisa kushandisa akanaka mahedhifoni.
Mutambi anofanira kunge aine "smart playlist" ficha
Nekuti kana iwe uri kumafaro, kusangana neshamwari dzako kana kubika, nziyo dzakanaka dzinoenderana pamwe chete dzinoramba dzichirira uye nguva yacho inoshamisa.
Mutambi haafanire kumanikidza mushandisi kugara achipindirana mune zvinyorwa
Pfungwa iyi ndeyekuti iwe unogona kubaya-baya pane imwe albamo uye woitamba, pasina kukosha kwekuwedzera mabhatani kuti ugadzirise zvakare playlist.
EMutambi anofanira kunge aine nzira yakapusa yekuisa yekuvhara mifananidzo
Vamwe vanhu vanogumbuka neichi chinhu. Ivo vanofarira kuve nemadingindira avo neicho chaicho chivharo uye zano nderekuti mutambi anotambira yakapusa mifananidzo kuti aisanganise iwo pasina dambudziko. Nenzira iyi haufanire kuchinja mapurogiramu kuti uone nziyo nemufananidzo wakakodzera.
Mutambi anofanira kuratidza chinobatika bit rate apo mimhanzi iri kutamba
Kungoti nekuti isu tinoda kuziva uye kuti zvese zvinhu ndezvechokwadi.
Mutambi anofanirwa kuve neakanakisa kuronga, dhizaini uye kuita
Mamwe mazano ndeaya: Guayadeque, QuodLibet, Gmusicbrowser, DeaDBeeF, Audacious, Rhythmbox. Nekudaro, isu tinoda kunzwa mafungiro ako uye mazano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » 6 maficha anofanirwa kuve nemumhanzi wako
Jose de Costa akadaro
Ini ndinoshandisa Qmmp, yakanaka kwazvo
Pindura kuna Jose de Costa
Saka ini ndiri njodzi ini handidi chinhu, chese chandinokumbira ndechekuti inogamuchira mafomati ese uye hainamirwe, zvakanyanya ini ndinoridza mimhanzi neVLC xDDD
Sayonara mwana… .. Guayadeque zvakare yakanaka kwazvo
Maonero ako pachako:
Rhythmbox, kupfuudza mimhanzi yangu kumuverengi wangu wekunze. Basa rake raitwa zvakanaka.
Banshee, kuti vachengetedze dambarefu remimhanzi zvakarongeka, vatambi vanogumira pakuratidzira nziyo dzakarairwa mune yavo interface, asi hazviite kudaro mufaira rine izvo.
Clementine, foni yangu sekudzora kure. Parizvino iri Android app inoshanda nemazvo uye ine mikana yakawanda.
Ini ndinoshandisa Clementine; zvakanaka kwazvo. Zvakadaro, ini ndinofunga hapana chinokunda Amarok vhezheni 1.4.
Pindura kuna nacho
Imwe yakapfuura akadaro
Ini ndinobvumirana naNasher_87: VLC rulez!
Kunze kweizvozvo neVLC unogona kugadzira zvinyorwa zvekutamba, chinja iyo yakavharika pikicha, ona iyo bitrate, gadzirisa metatags,… uye teerera kumumhanzi, zvinova ndizvo zvandinoishandisa.
Pindura kune Uyo aipfuura
Anoshandisa Amarok kuno. Ichokwadi kuti yakanyanya kuwanda mutsika yekuve wakakundwa zvachose neshanduro 1.4 uye kuti shanduko kuenda ku2 yakanga yakaoma. Asi ikozvino iri kushanda nezvose zvayange iine uye nezvimwe zvakawanda. Kana ini ndikawedzera MP3, iyo dhatabhesi inogadziridzwa otomatiki, kana metadata isiriyo, shandisa MusicBrainz kuigadzirisa, inongotsvaga iyo butiro, kunyangwe ichishandisa Google Mifananidzo kana zvakakodzera (mashoma Dzimwe nguva zvinokanganisa, uye kana zvikaitika ndinogona kuzviisa nemaoko), zvinoshanda zvirinani neMPP zvishandiso, zvine sarudzo dze otomatiki zvinyorwa (zvandisina kumbobvira ndashandisa), ndinodzora mimhanzi nekhibhodi ndichishandisa mapfupi epasirese kana makiyi emultimedia uye ini ndinoshandisa KDE Unganidzo kushandisa yangu yekudzivirira nhare mbozha. Saka ... mushandisi anofara pamusoro apa
Ini ndinoshandisa kushinga, clementine, vlc uye zvakare mplayer 🙂
Yakwana yangu VLC inoda.
Parizvino ini ndaneta neese iwo mapurogiramu, ndiri kungoshandisa mpd + ncmcpp uye kana ndiri parunhare, ndinodzora mimhanzi yandinoda kutamba kubva pano kana ndiri kuiwedzera kune iyo runyorwa kana nhanho yapfuura, ini ndinogadzira rondedzero uye ini ndinongoremedza iyo yakagadzirira kutamba.
ps: Ini ndaneta nekuyedza uye kuyedza, uye kwandiri, iyi ndiyo mhinduro iri nani izvozvi.
Ichokwadi sezvo ini ndichishandisa Spotify, ini ndakaisa parutivi ivo vatambi. Iyo spotify muUbuntu neLinux haina rutsigiro padanho rakaenzana neMac neWindows.
Asi chikumbiro chakanakisa, zvisati zvaitika naClementine chaive mutambi wangu wekutanga.
Ini ndaive mushandisi wezuva nezuva weAmarok 1.4
Asi kubvira ndichichinjira kuAmarok 2, ndakatsvaga imwe nzira ndokuuya kuClementine. kubva ipapo ndiyo yanga iri mutambi wangu mukuru.